ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: January 2011
ဟိမ၀န္တာတောင်ထိပ်က တောင်ဆိတ်တွေ...
ပြောယင်တော့ ယုံနိုင်ဖွယ်တောင်မရှိပါဘူး...ဒီတောင်ဆိတ်တွေအကြောက်အလန့် မရှိ တောင်ခါးပန်းတွေ
သဘာဝကပေးတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရဲ့ အံ့ သြချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပါပဲ...
Posted by Unknown | at 11:17 AM |4comments
Labels: news: video: youtube
ကျန်းမာရေးအတွက်လေလည်ခြင်းဟာ ပြစ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အာဖရိကတိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ
မာလာဝီနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဟာ နိုင်ငံသားများအနေနှင့် တာဝန်သိစိတ်နှင့် စည်းကမ်းပြည့် ဝသည့်သူများဖြစ်စေ
ဖို့ ပုံသွင်းသင်ပြဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့ အနေနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းသူများအား အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်...
သို့ သော်လည်း အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖော်ထုတ်ညွှန်ပြဖို့ ကတော့ ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံ
သားများကစိုးရိမ်နေကြပြီး အမှန်တစ်ကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ( လေထုညစ်ညမ်းစေသူများ ) က ၎င်းတို့ 
မကျေနပ်သည့် သူများအား အပြစ်လွှဲချမှုကြောင့် မှားယွင်းစွာ တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆ
မာလာဝီနိုင်ငံသားတစ်ဦးက အာဖရိကသတင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပြောကြားခဲ့ ရာမှာတော့ " အလို!!! ဘုရားရေ!!
လူတွေအမြောက်အများစုမိကြတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုဘယ်လိုများဖြစ်မလည်း....သူတို့ တစ်တွေက ကားတစ်
စီးလုံး တစ်ဝက်ပြည့် အောင်ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်မှာလား...." ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
လေထုညစ်ညမ်းမှုဟာလည်း သဘာဝဘေးအန္တရယ်တစ်ပါးမို့ တားဆီးကာကွယ်ကြရမည်သာ....
" ပြီးတော့ တရားခံရှာဖွေဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုယင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလည်း ? ကလေး
တွေဆိုယင်လည်း သူတို့ လေလည်တယ်ဆိုတာပြောင်ငြင်းပြီး လူကြီးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...
သဘောသဘာဝအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရကိုက ဒီလိုကိစ္စမျိူးဟာ အလွန်အရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ် "
လို့ သူမကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ခြားသူတစ်ဦးကလည်း " ယခုဆိုယင် မာလာဝီနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အလွန်အရေးထားရမယ့် ကိစ္စ
တွေရှိနေကြပါပြီ...လူတွေလေထုညစ်ညမ်းမှု ( လေလည်မှု ) ထက်စာယင် တရုတ်ပြည်ကလာရောက်ပြီး
ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဒေသခံတွေကိုအလုပ်မခန့် တာ ( သူတို့ လူမျိူးတွေကိုပဲခေါ်လာပြီးခန့် တာ )၊
ဥပေဒပြုအမတ်များ ( အာဏာပိုင်များ ) အကြီးအကျယ် မရိုးမသားလာဘ်စားတာတွေ၊ အထူးသဖြင့် တော့ 
အာဏာရပါတီကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေပေါ့ ၊ တစ်ခြားအရေးတစ်လုပ်စရာတွေကိုဘေးချိတ်ပြီး ဒီကိစ္စကိုဘာ
ကြောင့် များဦးစားပေး၊ အလေးထားနေသလည်းဆိုတာတော့ နားကိုမလည်နိုင်ပါဘူး..." လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါ
အဆိုပါ လေထုညစ်ညမ်းစေသည့် ပြစ်မှုတွေကို အသစ်ဖန်တီးမည့် ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးများ စနစ်တွင် ဆုံး
ဖြတ်အပြစ်ပေးနိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး တစ်ခြား ပြစ်မှုများကိုလည်းဆုံးဖြတ်စီရင်နိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းဥပဒေမူကြမ်းကို
နိုင်ငံ၏ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် အခြေအတင်စဉ်းစားဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်...
အေ၇းမပါတာတွေတော့ တော်တော်လုပ်တဲ့ သူတွေပဲ...
Breaking wind is set to be madeacrime in an African country. The government of Malawi plan to punish persistent offenders 'who foul the air' inabid to 'mould responsible and disciplined citizens.'
But locals fear that pinning responsibility on the crime will be difficult - and may lead to miscarriages of justice as 'criminals' attempt to blame others for their offence. One Malawian told the website Africanews.com: 'My goodness. What happens inapublic place whereagroup is gathered. Do they lock up halfaminibus?
Posted by Unknown | at 8:19 AM |2comments
Labels: news: daily telegraph
World's 'unluckiest man' struck by lightning
လွန်ခဲ့ သည့် လေးနှစ်က ဂျွန်ဝါဒီအဂန်တစ်ယောက် သူမောင်းနေခဲ့သည့် တက္ကစီကားပေါ်မှာပင် သေနတ်
နှင့် ထောက်ပြီးအကြမ်းပတမ်း တွန်းထိုးပြီး ကားနောက်ခန်းထဲထည့် ကအလုခံခဲ့ ရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ သ
တင်းပို့ တိုင်ကြားခဲ့ ပါတယ်...
နောက်တစ်နှစ်အကြာ၊ လွန်ခဲ့ သည့် သုံးနှစ်ကတော့ သူ့ ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ မီးဖိုချောင်သုံးအသားခုတ်ဓါးတစ်
ချောင်းစိုက်လျှက်တန်းလန်းဖြင့် မီးသတ်စခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ အသည်းအသန်ကားမောင်းဝင်လာခဲ့ ရပြန်
တစ်ဖန် နောက်တစ်နှစ်အကြာ၊ လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်နှစ်မှာတော့ သူ့ ကိုတစ်ချိန်တည်း အဆိပ်ရှိမြွေနှစ်ကောင်
က တစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုက်ခဲ့ တယ်လို့ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်ကနေပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၊ တွေ့ ဆုံ
မေးမြန်းခန်းကနေ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသို့ မြွေဆိုးနှစ်ကောင်တစ်ပြိုင်နက်ထဲကိုက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွမ်းကျင်သူများက သံသယရှိခဲ့ ကြ
သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအဆိုးဆုံးလူသားဖြစ်နေမလားလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်..
ဟုတ်လည်းဟုတ်နိုင်ပါတယ်လေ....အသက် ၄၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် အမျိူးသားဟာ ယခုအခါမှာလည်း ဆေးရုံ
ပေါ်ကိုရောက်နေခဲ့ ရပြန်ပါပြီ....ဒီတစ်ခါတော့ သူဟာ အသက်သေနိုင်လောက်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ မိုးကြိုး
ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့ သည့် အင်္ဂါနေ့ က ၎င်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် မုန်တုန်းထန်သည့် အချိန်မှာ
ဖြစ်ခဲ့ တာပါလို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ထိုစဉ်က သူဟာ မီးဖိုချောင်ထဲကလက်ဆေးကန်ကိုမှီပြီး တယ်လီဖုံးပြောနေ၊ နားထောင်နေခဲ့ တာဖြစ်ပြီး
ဂျိန်းကနဲအသံကြီးကြားခဲ့ လိုက်ရကာ အရာအားလုံးအမှောင်ကျသွားခဲ့ တာ ( သတိလစ်မေ့ မြောသွားခဲ့ )
ဘုရားစူး...မိုးကြိုးပစ်၊ ဓါးပြတိုက် ၊ မြွေကိုက်လို့ မကျိန်ပါနဲ့ ဗျာ...
အခုတော့ ကျွန်တော့် ကိုအကုန်လုံးဖြစ်နေပြီ...
အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မစ်တီအဂန် ကသူ့ ဘေးပေအနည်းငယ်အကွာမှာရှိနေခဲ့ 
ပြီး တယ်လီဖုံးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကို သူမကြားလိုက်ရပြီး အိုး...အိုး...အိုး...ဟုသူမ၏ဖခင်ဖြစ်သူ
အော်ဟစ်ကာအောက်ကိုလဲကျသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေတာတွေ့ လိုက်ရပါတယ်...
သူဟာ ပြန်သတိရလာချိန်မှာအရေးပေါ်ဆေးဝန်ထမ်းတွေသူ့ ကိုဝိုင်းနေပြီး သူ့ ရဲ့ ညာဖက်ရှူးဖိနပ်လည်း
လွင့် စဉ်ကျွတ်ထွက်သွားကာ ခြေအိတ်မှာလည်း အပေါက်ကြီးတစ်ခုတွေ့ ရှိခဲ့ ရလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" ကျွန်တော့် ဖြင့် ( အရှင်လတ်လတ် ) မီးရှို့ ခံလိုက်ရသလားလို့ တောင်ခံစားမိပါတယ်..." လို့ လည်း သူက
သူ့ ရဲ့ မြွေကိုက်ခံရခြင်းစသည့် သတင်းတွေကိုဖတ်ကြပြီး သူဟာလိမ်နေတာ၊ ဆေးအလကားရဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်
ကို နှိပ်စက်နေတာ စသည်ဖြင့် လူတွေသူ့ ကိုပြောနေကြမှာကို သိပါတယ်...
" လူတွေကျွန်တော့် ကိုဘာပဲပြောပြော ဂရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ...အချိန်ကျယင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးသလားဆိုတာ
လည်း ကျွန်တော့် ကိုဆေးစစ်ကြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" လူတစ်ယောက် မိုးကြိုးပစ်ခံသလား မခံရသလားဆိုတာသက်သေအတိအကျမပြနိုင်ပါဘူး...ဂျွန်အဂန်မှာ
သိသာထင်ရှားတဲ့ မီးလောင်ဒါဏ်ရာလည်းမရှိပါဘူး... မိုးကြိုးပစ်ခံရတယ်လို့ ဆိုတဲ့ လူအများစုမှာလည်း မီး
လောင်ဒါဏ်ရာမရှိကြပါဘူး..." လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုပါတယ်...
သူ့ ထက်ကံဆိုးတဲ့ သူတောင် သူ့ လောက်ကံဆိုးလိမ့် မယ်မထင်ဘူး...
Four years ago, John Wade Agan told deputies he was robbed at gunpoint in his taxicab, roughed up and stuffed into the trunk of the car. Three years ago, he drove toafire station withabutcher's knife sticking out of his chest. Two years ago, inanews conference from his hospital bed, he told the world he'd been bitten by two different snakes at the same time,aclaim experts doubted.
He said he might have been the unluckiest man in the world. Now, Agan, 47, occupies another hospital bed, befallen, he said, by yet another freak calamity: lightning. He said it happened on Tuesday evening during the severe storm that hit the area. He was leaning overametal kitchen sink, holdingacorded phone up to his ear, when he heardaloud boom. He said he blacked out.
His 26-year-old daughter, Misty Agan, was standing just feet away from him and said she heard the phone drop. "Oh! Oh! Oh!" she said she heard her dad say before he crumpled to the ground and began to shake. Agan said he awoke surrounded by paramedics, finding his right shoe off andabig hole in his sock. "It felt like it was on fire," he said
He knows what people say about him — what they said after reading about his snakebites, what some will say when they read this story — that he's lying or somehow hurting himself, maybe to get pain medicine. "I don't care what people say," Agan said. "Any day of the week, I'll go takeadrug test." There's no way to prove someone has or hasn't been struck by lightning, experts say. John Agan doesn't have any obvious burn marks. Most victims don't.
Posted by Unknown | at 2:48 AM |0comments
Labels: news: tampabay.com
Russian Couple Tie the Knot at -30 Degrees Celsius
ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယားနယ်တွင် လွန်ခဲ့ သည့် စနေ နေ့ က အလွန်ထူးခြားသည့် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်
ဆာဂေကိုနော့ ဗ် နှင့် စေ့ စပ်ထားသည့် ၎င်း၏ချစ်သူ အီရီနာကူဇ်မင်ကို တို့ နှစ်ဦး အနှုတ် ၃၀ ဒီဂရီအေး
သည့် ဆိုင်ဘေးရီးယားနယ်မှ ကရန်စနိုယာ့ စ်ခ် မြို့ လေးရှိ အီနီဆေး မြစ်၏ ရေခဲတစ်မျှအေးသည့် ရေပြင်
တွင် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲကျင်းပခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ဆိုက်ဘေးရီးယားနယ်၊ ထိုအရပ်ရှိ ရေခဲမြစ်ရေကူးအသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းအား " ပင်လယ်ဖျံ " ဟုလူသိ
များသည့် ဆာဂေ တစ်ယောက် ၎င်း၏လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲအတွက် ထိုကဲ့ သို့ အများသူငါအလွယ်တစ်ကူ
လိုက်မလုပ်နိုင်သည့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် အခြေအနေမျိူးတွင် ပြုလုပ်ရန်အမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ ပေမယ့် ချစ်
သူမိန်းကလေးကတော့ ဆောင်းတွင်းအအေးကဲသည့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကို သဘောကျနှစ်သက်လှ
သို့ သော်လည်း ဖျံသို ကြီးကိုမှချစ်မိသည့် သူမရဲ့ အချစ်ကားကြီးမားပြင်းထန်ရကား ထိုကဲ့သို့ နှလုံးသွေးခဲ
သွားနိုင်လောက်သည့် စွန့် စားမှုကို ပြုလုပ်ရန် သဘောတူလက်ခံခဲ့ ပါတယ်...
( သြော် အဖေ၊ အမေကများ ငါ့ သမီး အဲဒီရေခဲမြစ်ထဲဆင်းဆိုယင် သေချာပေါက်ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူး...)
အလေ့ အကျင့် ရပြီး၊အအေးဒါဏ်ခံနိုင်ရန် ကြိုတင်ရေချိူး ပြီးနောက်မှာတော့အီရီနာ တစ်ယောက် မိတ်
ဆွေသူငယ်ချင်းများစောင့် ဆိုင်းနေသည့် ရေခဲမြစ်ထဲသို့ သူမရဲ့ ချစ်သူ ဖျံသို နောက်က ကောက်ကောက်
ပါအောင် ဆင်းလိုက်သွားပါတော့ တယ်...
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများက ပူပူနွေးနွေးလက်ထပ်မယ့် ချစ်သူစုံတွဲနှစ်ယောက်ကို မြစ်ရေထဲမှာ ၀ိုင်းဝန်း
စောင့် ဆိုင်းနေကြပြီး ရေခဲအောက်အနှုတ် ၃၀ ဒီဂရီအေးလို့ မည်သည့် ဘုန်းတော်ကြီးမှ သတ္တိကောင်း
ကောင်းနဲ့ သူတို့ နှစ်ဦးကိုလက်မထပ်ပေးနိုင်တာမို့ ဆာဂေတစ်ယာက် ချစ်သူအီရီနာရဲ့ လက်မှာလက်ထပ်
လက်စွပ်လေးစွပ်ပေးပြီး မိတ်ဆွေများက ကောင်းချီးသြဘာပေးခဲ့ ကြပါတယ်...
၎င်းနောက်တော့ အချစ်ကြောင့် ပူနွေးဆူဝေနေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲအတွက် ထိုအခမ်းအနားတစ်လျှောက်လုံးရေ
ခဲတစ်မျှအေးနေတဲ့ မြစ်ရေထဲမှာ မတ်တပ်ရပ်ကာ ပါဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ဟာ ကံကောင်းစွာပဲ အမှန်တစ်
ကယ်နွေးထွေးတဲ့ သစ်သားအိမ်လေးထဲမှာ ညလုံးပေါက် ကခုန်ခဲ့ ကြပါတယ်...
( သတို့ သားနဲ့ သတို့ သမီးကတော့ တစ်ညလုံးကတဲ့ အထဲမှာမပါတာတော့ အသေအချာပါပဲ...)
" ကိုယ့် ချစ်သူ ( လက်ထပ်ဖို့ စေ့ စပ်ထားသူ )ဆန္ဒရှိတဲ့ ရေခဲအောက်အနှုတ် ဒီဂရီ ၃၀ ရှိတဲ့ မြစ်ထဲမှာလက်
ထပ်တာက လွဲယင် ကျန်တာဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော့် အတွက် ချစ်တယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး...
ကျွန်တော်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူအနေနဲ့ ကျွန်တော့် ကိုနားလည်ပြီး လက်ထပ်ပွဲကို အဖော်အချွတ်ကလပ်မှာ
လုပ်တာထက် ဒီလိုလုပ်တာမျိူးကို လက်ခံဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ တာပါပဲ..." ရေခဲမြစ်ရေကူးသမား ဆာဂေ ကပြော
The unusual event took place last Saturday, when Sergei Kaunov and his fiancee Irina Kuzmenko got married in the ice-cold waters of the Enisei River, in the Siberian city of Krasnoyarsk, atatemperature of -30 degrees Celsius.
Sergei, also known as “The Walrus”, isamember of the local ice-swimming club, always dreamed of getting married in such extreme conditions, but his fiancee was neverabig fan of winter and low temperatures. Still, her love for The Walrus was so great that she agreed to go through this heart-stopping challenge. So after takinganice bath to warm up, Irina followed her beloved into the frozen waters, where their friends were already waiting. They formedahalf circle around the happy couple, and since no priest was brave enough to marry them at -30 degrees, Sergei simply putaring on Irina’s finger, while the crowd cheered.
Luckily, friends and family of the happy couple who were to cold to stand by them during the offbeat ceremony, got to join the festivities inanice warm wooden cabin, where they danced the night away.
I tell ya’, nothing says “I love you” like getting married at -30 degrees, because that’s what your fiancee wanted. I wish my wife had been so understanding and agreed to have the wedding atastrip club…
ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ အေးမြချမ်းသာပါပြီ...
ရင်ထဲမှာတော့ အချစ်တွေနဲ့ ပူနွေးဆူဝေနေလေရဲ့ ....
ဘေးကလူတွေကပါ မဆီမဆိုင် အအေးခံပြီး ကျင်းပပေးခဲ့ ကြတယ်...
Posted by Unknown | at 12:39 AM |2comments
Labels: news: odditycentral
Man who fathered child at 14 to become UK's youngest grandad at 29
အသက် ၁၄ နှစ်မှာကလေးအဖေဖြစ်ခဲ့ သူက ၂၉ နှစ်တွင် အဖိုးဖြစ်လာ....
၎င်း၏အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိသမီးဖြစ်သူက လာမည့် နွေရာသီတွင် ကလေးမီးဖွားတော့ မည့် အမျိူးသား
တစ်ဦးဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အသက် အငယ်ဆုံး အဖိုးဖြစ်လာတော့ မည်ဖြစ်သည်....
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိူးသားဟာ ၎င်းကိုယ်တိုင် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကလေး
သို့ သော်လည်း အထက်တန်းပညာရေး GCSE အတန်းသို့ ရောက်ကာစ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူတစ်ယောက်
ကိုယ်ဝန် ၁၁ပါတ် ( ၃ လနီးပါး ) ရှိနေပြီဟုသိလိုက်ရချိန်မှာတော့ အလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ ရပါတယ်
လို့ ထိုသူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ငယ်ရွယ်သည့် သမီးဖြစ်သူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ၎င်း၏အမည်ကိုဖော်
ပြခဲ့ ခြင်းမရှိသည့်ဝေလနယ်တောင်ပိုင်းမှ ဖခင်ဖြစ်သူက " ( ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ) ၀ဋ်ပြန်လည်တာ
ပါပဲခင်ဗျာ... ( သူလည်းသူများသားသမီးကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ချစ်လူမိုက်လုပ်ခဲ့ တာမဟုတ်လား )
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး အဖိုးဖြစ်ရတာကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိပါရဲ့ ( သူတို့ ဆီမှာက
ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် အဲဒီလို ဘာအဖြစ်ဆုံး၊ ညာအဖြစ်ဆုံးဆိုပြီးနာမည်ကြီးချင်ကြတာလေ)
ဒါပေမယ့် သမီးဖြစ်သူလည်း ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့ ကျွန်တော့် ဖြင့် ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတာ
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကလေးအမေ၊ ကလေးအဖေဖြစ်ရတာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်
က ကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိခဲ့ ရတာမို့ အခု သမီးဖြစ်သူလည်း ဒီလိုဒုက္ခမျိူးထပ်တူခံစားရဦးမယ်ဆိုတာသေချာ
ပါတယ်...ဒါပေမယ်မယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုတော်တို့ ဟာသမီးကိုတော့ မပစ်ပယ်ပဲစောင့် ရှောက်ကူညီ
သွားမှာဖြစ်ပြီး ရောက်ရှိလာမည့် ကလေးငယ်ကိုလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..."
" ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို အဖိုးတစ်ယောက်လို့ ကိုခံစားလို့ မရပါဘူး...ဆံပင်လည်းမဖြူသေး၊ နား
ကလည်း မလေးသေးပဲအကောင်းကြီးရှိနေပါသေးတယ်...အသက် ၄၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် မိခင်ကြီးက
လည်း ဘွားဘွားကြီးဖြစ်ဖို့ ကိုစိတ်တွေစောနေပါတယ်...အမေကကျွန်တော့် ကိုကိုယ်ဝန်ရှိတော့ အသက် ၁၈
နှစ်ရှိပါပြီ....ကျွန်တော့် သမီး သူ့ ရဲ့ မြေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့ အမေတော်တော်ထိတ်လန့် တုန်
လှုပ်သွားပါတယ်....ဒါပေမယ့် အခုတော့ လည်း ( မြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ) ပျော်နေပါပြီ..." လို့ သူကဆို
အမေ့ ရဲ့ အမေ ( ကျွန်တော့် အဘွား ) ကလည်းအသက်ရှင်လျှက်ပဲရှိနေပါသေတယ်...ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် 
အဘွားဟာ အဘီဖြစ်တော့ မှာပေါ့ နော်...
မျိူးဆက် ၆ ခုလောက်တစ်ချိန်ထဲအသက်ရှင်နေကြတဲ့ မိသားစုဆိုတာတော့ တော်တော်ရှားမှာပါ လို့ လည်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ( ယူအေ သို့ မဟုတ် အင်္ဂလန် ) နိုင်ငံရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးအဖွားကတော့ အသက် ၂၆ နှစ်အ
ရွယ်အမျိူးသမီးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူက ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ယော့ခ်နယ်တောင်
ပိုင်း၊ ရိုသာဟမ်အရပ်မှာ မီးဖွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
A man will become the UK’s youngest ever grandfather when his 14-year-old daughter gives birth this summer. The 29-year-old was just 14 when he becameafather himself in 1996. But he admitted he was “fuming” to discover his daughter, who has just started her GCSEs, is 11 weeks’ pregnant.
The dad – who has not been named to protect his young daughter – from South Wales, said: “It’s like history repeating itself. I quite like the idea of being the youngest grandad in Britain, but at the same time I’m fuming that she is pregnant. I know myself how tough it is beingateenage parent and now she has to go through the same thing. However, we’re all going to stand by her and we will welcome the little one into the family.
“I don’t feel likeagrandad – I’ve not got grey hair and my hearing is top notch.” He added that his 47-year-old mother cannot wait to becomeagreat-grandma. “She was 18 when she had me,” he said. “She was shocked when I told her the news, but she is happy now.
“Her own mum is alive, and so too is her grandmother, who will becomeagreat-great-great grandmother. There can’t be too many families with six generations alive at the same time.” The UK’s youngest grandmother was 26 when her daughter, 12, gave birth at their home in Rotherham, South Yorks, in 1999.
Posted by Unknown | at 11:16 PM |4comments
Labels: news: mirror .co.uk
The Story of Doug Forbis
ဒိုးဖိုဘစ်စ် ကိုဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲအလွန်ရှားပါးသည့် မွေးရာပါခါးရိုးချွတ်ယွင်းမှု၊ မသန်မစွမ်းရောဂါ ဖြင့် မွေးဖွား
ထိုရောဂါဟာ မိခင်ဝမ်းထဲမှာ သန္ဓေတည်နေစဉ်မှာပင် သန္ဓေသားလောင်းရဲ့ ခါးရိုးပုံမှန်မဖွံ့ ဖြိုးပဲ မွေးလာခဲ့ 
လျှင်လည်း အများအားဖြင့် ခြေထောက်များမပါရှိပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ဒိုးဖိုဘစ်စ် ကတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိူးကြားထဲကပင် သူ့ ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်
ယခုတော့အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ လူငယ်မှာချစ်သူရည်းစားပင် ရှိယုံမက ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့် ကစားနိုင်သည့်
အားကစားနည်းများလည်း နှစ်သက်စွာကစားနိုင်ကာ အထူးဂရုစိုက်မှုလိုအပ်သည့် ( မွေးရာပါချွတ်ယွင်းချက်
ရှိသည့် ) ကလေးငယ်များအားသင်ကြားပြသပေးသည့် ဆရာဖြစ်လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဘ၀မှာ အရှုံးမပေးချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိဖို့ ပဲလိုပါတယ်....
Doug Forbis was born withavery rare health condition called sacral agenesis.
It's whenathe spine doesn’t develop properly in the womb and people are born mostly without legs. But even sacral agenesis couldn't stop Doug Forbis from being happy. This 24-year-old guy hasagirlfriend, love wheelchair sports and wants to beateacher for children with special needs.
နောက်တော့ ခြေထောက်များပါ သိမ်သွားခဲ့ ရတယ်...
ရုတ်တရက်ဆိုယင်တော့ လန့် စရာပါပဲ...
ခြေထောက်မရှိလည်း လက်နဲ့ ဖြစ်အောင်လျှောက်မယ်...
အချစ်မှာ မညီမျှမှုတွေဆိုတာ မရှိပါဘူး....
အဲဒီလိုစိတ်ထားနိုင်ယင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ လေ...
မရှိ၊ ရှိတဲ့ အပိုင်းကတော့သန်မာစေ၇မည်....
အခက်အခဲအတားအဆီးလည်းကျော်ပြီး နံရံတက်ကစားနည်းမှာပါ အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ ပြီ...
Posted by Unknown | at 12:08 AM |3comments
Labels: Photo : General Knowledge
Chilli fumes send four to hospital in Finland
ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အက်စပူးမြို့ မှ လူနေတိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် ငရုပ်သီးလှော်နံ့ ကြောင့် အသက်ရှူမွန်းကြပ်မှုပြ
ဿနာကြောင့် လူလေးဦး လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္လာနေ့ ကဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ ရပါတယ်...
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများအနေဖြင့် ထိုငရုပ်လှော်နံ့ ၊ ညှော်နံ့ ရရာအပေါ်ထပ်သို့ ဓါတ်ငွေ့ မျက်နှာဖုံးများ
စွပ်ပြီးသွားရောက်ခဲ့ ရတယ်ုလို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် မီကာမယ်ကလေး က
ပြောကြားလိုက်ပြီး မီးခိုးမရှိသည့် အနံ့ အသက်များဟာ ( အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးတွင်သုံးစွဲသည့် ) ငရုတ်
ကောင်းမှု့ မျက်ရည်ယိုဗုံးအနဲ့ နှင့် တူပါသည်ဟုလည်း ဆိုပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ ညှော်ကြမယ်ဗျိူ့ ဆိုယင် ပြီးပါတယ်...
ထိုအဆောက်အဦးထဲသို့ ပထမဦးဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့ သည့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားမှာ အပြင်းအထန်ချောင်း
ဆိုးခဲ့ ပြီးနောက် အသက်ရှူကြပ်ခဲ့ ရပါတယ် လို့ လည်း ထိုသူကထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အခန်းအတွင်းသို့ ရောက်သွားသောအခါ အခန်းပိုင်ရှင်များမေ့ လျော့ ထားခဲ့ သည့် မီးကျွမ်းနေသောငရုတ်
သီးကင်များပြည့် နေသည့် မီးဖိုတစ်ခုကို ကယ်ဆယ်ရေးသမားများကတွေ့ ရှိခဲ့ ကြပါတယ်...
အခန်းရှင်နှင့် သူမ၏ကလေးတို့ ကတော့ ညှော်နံ့ များကို လေသာဆောင်သို့ ထွက်ပြီးရှောင်ခဲ့ နိုင်ကြလို့ ၎င်း
တို့ အတွက်တော့ ဆေးဝါးပြုစုကုသဖို့ မလိုအပ်ခဲ့ ပါဘူး...
ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်လိုက်ရသည့် သူလေးဦးကလည်း ငရုတ်သီးညှော်ကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားမထိခိုက်မခံစား
ခဲ့ ကြရပါဘူးလို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ရဲ့ အဆိုအရသိရှိရပါတယ်...
The pungent smell of roasting chillies in an apartment building sent four people in the Finnish city of Espoo to the hospital on Monday with respiratory problems.
"Rescue workers had to use gas masks to get up to the top floors where the smell was coming from," rescue services spokesman Mika Maekelae said, saying the smokeless odour was akin to pepper spray.
The first rescue worker who entered the building hadabad coughing fit and trouble breathing, he added. Inside the apartment, rescue workers found an oven full of burnt whole chillies, which the occupant had forgotten.
The occupant and her child escaped the fumes onto their balcony, and did not need medical attention. The four people taken to the hospital were not seriously injured by the chilli fumes, according to the rescue services.
Posted by Unknown | at 11:03 PM |2comments
Labels: news: abc.net.au
Stoned to death with her lover: Horrific video of execution of girl, 19, killed by Afghan Taliban for running away from arranged marriage
ခိုးရာလိုက်ပြေးသည့် အာဖဂန်စုံတွဲကျောက်တုံးဖြင့် 
အိမ်ထောင်ရေးဖောက် ပြန်မှုဖြင့် စုံတွဲတစ်တွဲအား အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်တာလီဘန်သူ
ပုန်များက ကျောက်တုံးဖြင့် ထုသတ်အပြစ်ပေးခဲ့ သည့် ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာလူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်အားရိုက်
အဆိုပါဗီဒီယိုတွင်ရာနှင့် ချီသောရွာသားများက မြေပြင်တွင် လေးပေအနက်ရှိတူးထားသည့် ကြွင်းထဲ၌ခါး
အထိရောက်အောင် မြုပ်ထားသော ဆစ်ဒ်ကာ အမည်ရှိအမျိူးသမီးအား ၀ိုးလျှက်မတ်တပ်ရပ်နေကြသည်ကို
လူအုပ်ရှေ့ တွင်တာလီဘန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးက ပြစ်ဒါဏ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပြီးနောက် လူအုပ်ကြီး
က သူမ၏ ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အား ကျောက်တုံးများဖြင့် ပစ်ပေါက်နေခဲ့ ကာ ထိုမိန်းကလေးမှ ကြောက်
ရွံ့ စွာဖြင့် မြေတွင်းထဲမှလွတ်မြောက်ရန် ရုန်းကန်နေခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းမကလေးမှာ သွေးများဖုံးလွှမ်းလျှက်မြေပေါ်တွင်လဲကျသွားခဲ့ သော်လည်း အံ့ 
သြဖွယ်ရာပင် အသက်မသေပဲရှိနေခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအခါမှာတော့ တာလီဘန်သူပုန်တစ်ယောက်က သူမ၏ဦးခေါင်းအား အေကေ-၄၇ ဖြင့် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်
သူမအားထိုကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်နေချိန်မှာတော့ လူအုပ်ကြီးဟာ အလာဟူအက္ကဘာ ( ဘုရားသခင်ဟာကြီးမြတ်
တော်မူပါပေသည် ) ဟု အော်ဟစ်နေခဲ့ ကြသည်ကိုကြားသိနိုင်ပါတယ်..
ချစ်သူနှင့် ထွက်ပြေးသည့် အိမ်ထောင်ရှင်....
၎င်းနောက် သူမ၏ချစ်သူ ခေယမ် ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ကာ လူအုပ်ရှေ့ သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ ကို၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘက်ဖြင့် မျက်စေ့ ကိုစည်းလိုက်ပြီး နောက် မြေပေါ်သို့ ထိုင်ချစေခဲ့ ပါတယ်....သူ
ဟာ ပစ်ပေါက်နေခဲ့ တဲ့ ကျောက်တုံးများထံမှ သက်သာရာရအောင် မြေပေါ်မှာ ၀ပ်နေခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း အဆက်မပြတ်ပစ်ပေါက်နေသည့် ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲများဒါဏ်ကြောင့် သူဟာ မြေပေါ်
ခံပေဦးတော့ မပြေသည့် ၀ဋ်ကြွေး...
သူ့ အသံလုံးဝတိတ်ဆိတ်မသွားခင်အထိ သူ့ ရဲ့ ငိုကြွေးသံကိုကြားခဲ့ ကြရပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ ကျောက်တုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်စီရင်ခြင်းကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဟာ တာလီဘန်များ အာ
ဏာစွန့် ခဲ့ ကြရပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ဇွန်လက အာဖဂန်
နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကွန်ဒွတ်ဇ် နယ်၊ ဒက်ရ်ှတီအာချီ အရပ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်...
ဆစ်ဒ်ကာ ဟာ သူမရဲ့ အလိုဆန္ဒနှင့်ဆန့် ကျင်ပြီး မိဘများကို သူမကို ဒေါ်လာ ၉၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချစီစဉ်ခဲ့ 
သည့် လက်ထပ်ပွဲအပြီးမှာ ထွက်ပြေးခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ အာဏာပိုင်၊တာဝန်ရှိသူများကဆိုပါတယ်...
သူမဟာ ကလေးနှစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ရှင် ခေယမ်နှင့် အတူနေဖို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူတို့ 
နှစ်ဦးဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို ခိုးပြေးသွားခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
မောင်ရင်းတို့ ကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူး...
သို့ သော်လည်း သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ၎င်းတို့ ကိုမည်သည့် အန္တရယ်မျှမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ ကတိပေးခဲ့ သည့် လူ
ကြီးများရဲ့ စကားကြောင့် ရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
ဒါဟာတစ်ကယ့် ကိုစိုးရွံ့ ထိတ်လန့် စရာအမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့ တာပါပဲ....
သူတို့ နှစ်ဦးကို ညသန်းခေါင် ၂ နာရီအချိန်မှာ သူတို့ မိသားစုများရဲ့ နေအိမ်များမှ တာလီဘန်သူပုန်များက
ဆွဲခေါ်လာခဲ့ ကြပြီး သူတို့ ဘာသာဖွဲ့ စည်းထားသည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာတရားရုံးဖြင့် ဆုံးဖြတ်အပြစ်ဒါဏ်ချ
ကာသေဒါဏ်အဖြစ်ကျောက်တုံးဖြင့် ပြစ်ပေါက်စီရင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဖြစ်အပျက်ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် တာဂျစ္စတန်အကြား သဘောထားတင်းမားသူ အစွန်းရောက်ရှေးရိုး
၀ါဒီများ ကျင်လည်ကျက်စားရာ နယ်ခြားရွာကလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုဒေသဟာ တာလီဘန်သူပုန်များ ထိန်းချူပ်သည့် လက်အောက်တွင်တည်ရှိတာဖြစ်သော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ 
ကတော့ ကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုနောက်ကွယ်က တာဝန်ရှိသူများကို တရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးသွားမည်ဟု
ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ရဲချူပ် ဒါအွတ်၊ဒါအွတ်ကတော့ " အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုအဆိုပါဒေသကို
စေလွှတ်မှာဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ တရားဥပေဒရှေ့ မှောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာ
မှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ဘီဘီစီကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဗီဒီယိုကလစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုတော့ မနှစ်မြို့ ဖွယ်ထိတ်လန့် စရာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြမှု
ကြောင့် မပြသခဲ့ ပါဘူး...
တာလီဘမ် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဇိုင်ဘူလာမူဂျာဟစ် ကတော့ ကျောက်တုံးဖြင့် ပြစ်ပေါက်စီရင်ခြင်းကို ခုခံ
" အစ္စလာမ်ဘာသာကိုသိသူတိုင်း ကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်စီရင်ခြင်းဟာ ကိုရမ်ကျမ်းစာမှာပါဝင်တယ်ဆို
လူမဆန်တဲ့ လူတွေရှိပါတယ်....အဲဒါကတော့ သူတို့ ဟာ တမန်တော်ကိုစော်ကားကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်၊
သူတို့ ဟာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ အတွေးအခေါ်တွေကို ဒီတိုင်းပြည်ကို ယူဆောင်လာချင်ကြသူတွေဖြစ်
ပါတယ်..." လို့ ဘီဘီစီကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဗီဒီယိုလင့် ခ် ကိုကြည့် ချင်ယင်တော့ ဒီမှာနှိုပ်ပါ...
At this pointaTaliban fighter shoots her three times in the head with an AK-47The crowd can be heard shouting allahu akbar as she is killed.
Her lover, Khayyam, is then marched in front of the crowd with his hands tied behind his back.
But it is understand that they returned to their home village after being reassured by leaders that they would be unharmed.
It wasaterrible mistake. They were dragged from their families' homes at 2am by Taliban fighters and then put beforeakangaroo court before being executed.
The incident took place last October near the Afghan border with Tajikstan,aconservative district withaheavy extremist presence.
Police chief General Daoud Daoud told the BBC: 'Special police investigators will be sent there, we will find them and they will be brought to justice.'
Most of the video has not been shown because it was too graphic.
Taliban spokesman Zabiullah Mujahid defended the stoning.
He told the BBC: 'Anyone who knows about Islam knows that stoning is in the Koran, and that it is Islamic law.
'There are people who call it inhuman - but in doing so they insult the Prophet. They want to bring foreign thinking to this country.'
Posted by Unknown | at 11:37 PM | 1 comments
Man seeks cop cover from sex-crazed wife
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် တူရကီအမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ၎င်းနှင့် ၁၈ နှစ်ကြာပေါင်းသင်းလာခဲ့ 
သည့် ဇနီးဖြစ်သူ၏ မတင်းတိမ်မရောင့် ရဲနိုင်သည့် အချစ်ရမ္မက်အား သူမအလိုကျဖြည့် စွမ်းမပေးနိုင်တော့ 
သည့် အတွက် ထိုဇနီးဖြစ်သူထံမှ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံသွားရောက်၍ အကူအညီ
တောင်းခံခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
Bild သတင်းစာရဲ့ အဆိုအရ အဆိုပါအမျိူးသားဟာလွန်ခဲ့ သည့် အင်္ဂါနေ့ ကဂျာမနီနိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်
ပိုင်းဒေသရှိ Waiblingen မြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံသို့ သွားရောက်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
၎င်းအနေဖြင့် လွန်ခဲ့ သည့် လေးနှစ်လုံးလုံး အချစ်ကြီးသည့် ချစ်ဇနီးဖြစ်သူ၏မက်မပြေ အချစ်တွေပေးပါလေ
ဟု အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် ဧည့် ခန်းထဲမှ ဆိုဖာပေါ်တွင် အိပ်စက်နေခဲ့ ရသည်ဟု
လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုဇနီးဖြစ်သူနှင့် သားသမီးနှစ်ဦးရရှိအောင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့် အမျိူးသားဖြစ်
သူဟာ ( ဇနီးဖြစ်သူနှင့် ) ကွာရှင်းပြီး ထိုအိမ်မှစွန့် ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်တို့ ဂျာမန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်..
" အထူးသဖြင့် သူ့ ရဲ့ အလုပ်ကို အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပြီး ၊ လုံလုံလောက်လောက်အနားယူပြီးခွန်အားပြည့် လန်း
ဆန်းစွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ထိုအမျိူးသမီးကို ကွာရှင်းပြီး အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ 
" လက်ရှိအခြေအနေအရ ၎င်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူဟာ ( ရှောင်ပြေးအိပ်စက်နေရာ ) ဧည့် ခန်းကိုအမြဲလိုက်လာပြီး
ဇနီးမယားတစ်ယောက်အတွက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးဖို့ ထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုနေ
တာမို့ ၎င်းအနေဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနားရနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး... ( ဒါကြောင့် ) သူက ညဘက်တွေ
မှာ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေးရနိုင်ရန်ကူညီဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို တောင်းပန်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ 
ဟိုတုံးကတော့သူတို့ ပဲဇွတ်....အခုကျတော့ သူကပဲပါတ်ပြေးနေတော့ တယ်...
၁၈ နှစ်တောင်ပေါင်းသင်းနေခဲ့ ပြီးပြီဆိုတော့ ငြီးငွေ့ ပြီပေါ့ ....
A Turkish man living in Germany with his wife of 18 years went to police for protection from her insatiable appetite for sex.
According to the Bild newspaper, the man went to police in the southwestern German city of Waiblingen on Tuesday.
He told police he had been sleeping onasofa for the past four years inafutile attempt to escape the voracious sexual demands of his wife.
German police said the exhausted man - who fathered two children with his wife - decided to getadivorce and move out of the home.
"He has decided to getadivorce and to move out, in the hope of finally getting some rest, particularly as he is anxious to arrive at work well rested," police said.
"At the moment this is impossible because he says his wife keeps coming into the living room demanding that he perform his marital duties."
"He asked for police help in getting some sleep at night," police added.
Posted by Unknown | at 1:31 AM |3comments
Labels: news: nypost.com
Now I have two right feet: Chinese man has left foot attached to other leg in bid to save it
အခုတော့ ကျွန်တော့် မှာခြေဖ၀ါးနှစ်ခုနဲ့ ပါဗျာ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် လူနာတစ်ဦး၏ဘယ်ဖက်ခြေထောက်နှင့် ခြေဖ၀ါးအား ဖြတ်ပစ်ဆုံးရှုံးရခြင်း
မှကာကွယ်နိုင်ရန် ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါးအားဖြတ်၍ ညာဖက်ခြေထောက်တွင် ( ခေတ္တယာယီအားဖြင့် )
ထပ်မံတွဲချူပ်ကာ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်...
မစ္စတာမားလို့ အမည်ရှိတဲ့ လူနာမှာတော့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို ကယ်တင်ဖို့ လောလောဆယ်
ညာဖက်ခြေထောက်မှာ ခြေဖ၀ါးနှစ်ခု တပ်ဆင်ထားခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...
The patient, named as Mr Ma, has had his left foot attached to his right leg inabid to save the limb following an accident at work
လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်ပါတ်ခန့် က ဖြစ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်မတော်တစ်ဆဖြစ်မှုတစ်ခုမှာ ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေ
ထောက် ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ၏မစ္စတာမား အမည်ရှိလူနာဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အလယ်ပိုင်း
ကျန်ကျိူးမြို့ မှာ ယခုကဲ့ သို့ ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်၊ ချူပ်ဆက် ကုသမှုခံယူခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
ရောဂါပိုးဝင်ရောက်နေခဲ့ သည့် ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို မဖြစ်မနေဖြတ်ပစ်ရပြီး ၇ လက်မလောက်
ခြေတစ်ဖက်တိုသွားရမယ့် အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့် ဆရာဝန်များအနေနှင့် ယခုကဲ့ သို့ အခြေခံကျကျ
ညာဖက်ခြေထောက်က သွေးကြောတွေကိုသုံးပြီး ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါးကို ဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်
ထိန်းသိမ်းထားပြီး တစ်လအကြာမှာတော့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်မှာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေး
Doctors are using the right leg's vein and arteries to keep it healthy and hope to reattach the foot to the left leg inamonth's time
ဆရာဝန်များက ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါး ( ခြေကျင်းဝတ်အောက်ပိုင်း ) ကိုညာဖက်ခြေထောက်တွင်ပြန်
လည်ချူပ်လုပ်တပ်ဆင်ကာသွေကြောများ လှည့် ပါတ်စီးဆင်းခြင်းဖြင့် ထိုခြေဖ၀ါးဆက်လက်ရှင်သန်နေစေ
ကာ အချိန်ကာတစ်ခုအထိ လူနာအားခြေဖ၀ါးနှစ်ခုဖြင့်ရှိနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်...
နောက်တစ်လလောက်အကြာမှာတော့လူနာရဲ့ ခြေဖ၀ါးကိုဘယ်ဖက်ခြေထောက်မှာ ပြန်လည်ခွဲစိတ်ဖြတ်
ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်၊တပ်ဆင်ကုသမှုအောင်မြင်မှုရှိမရှိကတော့ စောင့် ကြည့် ရမှာပါပဲ....
A hospital in China has sewn the left foot ofapatient on to his right leg inabid to save both the foot itself and his left limb.
The patient, named as Mr Ma, had the surgery in Zhengzhou, in central China, followingawork accident two weeks ago which badly damaged his left leg.
It appears that doctors felt that the infected wound in the leg would have ultimately led to amputating the foot and leaving the limb 7in shorter - so decided to make their radical decision.
They decided to attach the left foot to the right leg and use that limb's arteries and veins to keep the foot healthy thereby leaving the patient, for the moment, with two right feet.
Further surgery will then reattach the foot back to the patient's left leg in aroundamonth's time.
Posted by Unknown | at 3:28 AM |3comments
Going cheap: A house full of snakes
သပ္ပေါတွေနဲ့ ပြည့် နေတဲ့ အိမ်...
This house where thousands of snakes dwell, is on cheap sale
လျှော့ ဈေးနဲ့ ရောင်းမယ် ....ဒါပေမယ့် မြွေတွေကတော့ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီပြီးရှိနေတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Chase Bank ဟာ Idaho ပြည်နယ်၊ Rexburg အရပ်ရှိဒေါ်လာ ၁၇၅၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိ
သည့် အိမ်တစ်လုံးအား ဒေါ်လာ ၆၆၀၀၀ ဈေးလျော့ ပြီးရောင်းနေပါတယ်....ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ အ
ဆိုပါနေအိမ်တွင် မြွေများထောင်နဲ့ ချီပြီးနေထိုင်လျှက်ရှိလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်...
အိမ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့် Benjamin နှင့် Amber Sessions တို့ ဒေ၀ါလီခံ၊ လူမွဲစာရင်းဝင်သွားခဲ့ ကြလို့ အ
ဆိုပါနေအိမ်ကိုလည်း ဘဏ်ကသိမ်းယူချိတ်ပိတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
" ယခင်အိမ်ပိုင်ရှင်များက အိမ်ဖိုးငွေအကျေမပေးချင်တာနဲ့ ဒီအိမ်မှာမြွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြံ
ဇတ်လမ်းလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ Benjamin Sessions
မျော့ ကြိုးမြွေတွေဟာ အဆိပ်မရှိလို့ လူကိုတော့အန္တရယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး...
Garter snakes are not poisonous and are harmless to humans
မြွေတွေတစ်ကောင်မှမရှိအောင်လဲ အသေးစိတ်ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်လို့ လည်း၎င်းတို့ ကိုပြောကြားခဲ့ 
တယ်လို့ထိုဇနီးမောင်နှံကဆိုပါတယ်...
၎င်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်ခြံမြေပွဲစားကပြောကြားခဲ့ သည့်အချက်အလက်များအား အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ မြွေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းဟာ လုပ်ကြံဇတ်လမ်းမဟုတ်ပဲ
တစ်ကယ့် ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာ သိလာရပါတော့ တယ်...
ထိုအိမ်အတွင်းရှိနေသည့် မြွေများဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွေ့ ရလေ့ ရှိသည့် မျော့ ကြိုးမြွေ တစ်မျိူး
၎င်းမြွေများဟာ အဆိပ်မရှိပဲ လူကိုအန္တရယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး....ပိုးမွှားတိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးသူတစ်ဦး
ရဲ့ အဆိုအရ ထိုနေအိမ်မှာ မြွေပေါင်းထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီပြီးရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်...
ယခုတော့ အမှန်အကန်အိမ်ရှာရန် အိမ်အကျိူးဆောင်ကုမ္ပဏီမှ Todd Davis အတွက်ကတော့ ထိုအိမ်ကို
၀ယ်မည့် သူ ရအောင်ရှာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေရပါတယ်...
၎င်းအနေနှင့် အိမ်မကြီးနှင့်အိမ်ရှေ့ မျက်နှာစာနံရံအကြားမြွေတွေထောင်နဲ့ ချီပြီး အပြည့် ရှိနေတာကို မငြင်း
" ကျွန်တော့် အထင်တော့ မြွေတွေအဲဒီအထဲကိုရောက်သွားပြီး အဲဒီမှာမှာ အသိုက်လုပ်ကာနေတော့ မယ်
လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပုံပါပဲ...အခုတော့ သူတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းမြွေတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအ
တူနေကြပုံပါပဲ..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
" ဒီအိမ်ကိုဝယ်မယ့် သူဟာ မြွေချစ်သူဖြစ်ယင်ဖြစ် မဖြစ်လို့ ကတော့ မြွေပါတွေအများကြီးမွေးထားတဲ့ သူပဲ
ဖြစ်မှ အဆင်ပြေမှာပါ..." လို့ Davis က အိမ်ဝယ်မယ့် သူနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကန်ဆပ်ပြည်နယ်၊ လောရင့် အရပ်ရှိ အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းဒေသ ကုန်းရေနှစ်ထွေနေ
သတ္တ၀ါများလေ့ လာရေးဆိုင်ရာဗဟိုညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျိူးကောလင်းစ် ကတော့ အဆိုပါနေအိမ်ဟာ မြွေတွေ
နေတဲ့ တွင်းအသိုက်ကြီးပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားခဲ့ ပုံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
" မြွေတွေဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ အသိုက်အမြုံကိုအထူးပဲ သစ္စာရှိကြပါတယ်...သူတို့ ဟာ ထိုအနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာ
ပဲပေါက်ဖွားကြပြီး အအေးဓါတ်ကို ကာကွယ်ဖို့ စုပေါင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်..." သူကဆိုပါတယ်...
မြွေတွေကတော့ ဖယ်မထုတ်မချင်း သူတို့ ဘာသာအလိုအလျောက်သွားမယ့် ပုံမပေါ်ပါဘူး...
ပြည်နယ်အတွင်း မြွေတိရိစ္ဆာန်များအား ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင်တာဝန်ရှိသည့် Idano ပြည်နယ် ငါးနှင့် 
တောရိုင်း ဌာနအနေဖြင့် မြွေများကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ လျှင်တောင်မှ မြွေအချိူ့ ကျန်နေခဲ့ နိုင်ကာ
ထိုမြွေများမှထပ်မံပေါက်ဖွားပြီး မြွေသိုက်ကြီးပြန်ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်လို့ လည်း ကောလင်းစ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီမြွေတွေဖမ်းပြီး တရုတ်ပြည်ပို့ လိုက်ရယင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေဖို့ ရှိပါတယ်...
The Chase Bank in the US is sellingahouse in Rexburg, Idaho, for US$66,000 (RM201,415) less than its estimated value of US$175,000 (RM534,056) because it's infested with thousands of snakes.
The home went into foreclosure after owners Benjamin and Amber Sessions were forced into bankruptcy.
"We were told that the previous owners in there didn't want to make their payment because they made upastory that there were snakes there, that they didn't want to pay their mortgage so they made upasnake story," Benjamin Sessions said.
The reptile occupants are believed to be common garter snakes,atype found throughout the US.
They are not poisonous and are harmless to humans. But, according toapest inspector, thousands are living in the house.
Realty Quest associate broker Todd Davis is now faced with the daunting task of trying to sell it.
He said he has no reason to disbelieve the accounts of hundreds of snakes sandwiched between the house and its exterior siding and piles of the reptiles in the crawlspace.
"I think the snakes got intoaspot and decided to make it their home, now they’ve invited all their friends," he said.
On his potential buyer, Davis said: "I guess I needasnake lover. Or someone with multiple mongooses."
Joe Collins, director of the Centre for North American Herpetology in Lawrence, Kansas, said it is likely that the house was built onasnake den site.
"Snakes haveagreat deal of fidelity to the den site," he said. "They’re born near there and they return each fall to den up and avoid the cold."
The snakes are not likely to relocate, voluntarily or otherwise.
Even if the Idaho Department of Fish and Game, which oversees reptiles in the state, agreed to dislodge the garters, some snakes will remain and reproduce, restarting the cycle, Collins said.
Watch the previous owners discussing their snake house - then valued at US$109,000 - here.
Posted by Unknown | at 11:29 PM |3comments
Labels: news: agencies
Dubai opens ‘world’s highest’ restaurant
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး အဆင့် မြင့် စားသောက်ဆိုင်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွင့် လှစ်
အမြင့် ဆုံးမှာကျွေးချင်ယင် ဒီကိုကြွခဲ့ ပါမိတ်ဆွေ...
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည့် Atomsphere ကိုဒူဘိုင်းရှိကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်
သည့် Burj Khalifa ၏ ၁၂၂ ထပ်မြောက်အလွှာမြေပြင်မှ ၄၂၂ မီတာ ( ပေပေါင်း ၁၃၅၀ ) အထက်တွင်
လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ကဖွင့် လှစ်ခဲ့ လိုက်သည်ဟု ထိုအဆောက်အဦး၏ပိုင်ရှင်များကပြောကြားခဲ့ လိုက်
မီတာ ၈၂၈ မီတာ ( ပေပေါင်း ၂၇၁၆.၅ ) မြင့် သည့် ထိုအဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည့် Atmosphere
စားသောက်ဆိုင်သည်ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များထဲတွင်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်ဟု
ဒူဘိုင်း၏အကြီးမားဆုံး တိုက်တာခြံမြေ၊ မြေကွက်ဖော်ထုတ်တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် 
Emaar ကုမ္ပဏီကြီး၏ အဖွဲ့ ခွဲ Emaar Hospitality အုပ်စုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အထူးမွေးနေ့ ပွဲလိုမျိူးကျင်းပနိုင်မယ့် သီးသန့် ခန်းနဲ့ လည်း ရနိုင်ပါတယ်...
ဒီလိုလေးရှုခင်းတွေကြည့် ယင်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်...
အဆောက်အဦးကြီး၏ အဝေးကြည့် မျှော်စင်အထပ်အောက် ဒုတိယမြောက်အထပ်တွင်တည်ရှိသည့် အဆိုပါ
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွင် လာရောက်စားသောက်မည့် ဧည့် သည်ပေါင်း ၂၁၀ ဆန့် ပြီး ကျယ်ဝန်းသန့် ရှင်းသည့် ဧည့်ကြိုခန်းမ၊ အဓိကစားသောက်ဆောင်၊ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် စားသောက်ခန်းများ
နှင့် သရုပ်ပြချက်ပြုတ်ဆောင်တို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ရုံးခန်းမများ၊ လူနေအိမ်ခန်းများအပြင် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Giogio Armani ဖွင့် လှစ်သည့် အဆိုပါဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း
နာမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သည့် တည်းခိုခန်းဟိုတယ်လည်းပါဝင်သည့် အပြင် ထိုအဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၂၄ ထပ်
တွင် လာရောက်ကြည့် ရှုသူတစ်ဦးလျှင် ၁၀၀ ဒီဟန်း ( ၂၇ ဒေါ်လာ ) ပေးရသည့် အဝေးကြည့် (မျှော်စင်
ပေါ်မှပြင်ပသို့ ကြည့် ရှုလေ့ လာနိုင်သည့်) ပြခန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်...
၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ ကဖွင့် လှစ်ခဲ့ ပြီး ခြောက်နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ ရသည့် 
၂၇၁၇ ပေမြင့် ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦး ဘုဂ်ျကာလီဖာ....
Emaar ကုမ္ပဏီဟာ အဆိုပါမိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အဦးကြီးကို ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံအကုန်အကျခံပြီး
တည်ဆောက်ခဲ့ ကာ ( အစပထမတော့ ထိုအဆောက်အဦးအား Burj Dubai ဟုအမည်ပေးခဲ့ ပြီးနောက်ပိုင်း
တွင် ) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာငွေကြေးအကြပ်အတည်းဖြစ်ခဲ့ ပြီးနောက် အခက်အခဲတွေ့ ခဲ့ ရသည့် ဒူဘိုင်း
အား ကူညီကယ်တင် ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ သည့် ယူအေအီးသမ္မတ ( အဘူဒါဘီပြည်နယ်စော်ဘွား ) ရှိတ်ကာ
လီဖာ ဘင်ဇာယက် အယ်လ်နာယန် ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Burj Khalifa ဟုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ပါ
ရေနံဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာနေသည့် အဘူဒါဘီပြည်နယ်အစိုးရက အကြွေးများအကြီးအကျယ်တင်နေသည့် ဒူ
ဘိုင်းအစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီကြီးများအား ဒေ၀ါလီခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်ယူအေအီးနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် 
အတူ ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ( စုစုပေါင်း ၂၀ ဘီလီယံ ) အဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်အရေးပေါ်ငွေကြေးအကူအ
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အူဆန်နိုမီယာမှ ကာယာဘူကီယာတာဗန်း စားသောက်ဆိုင်မှာတော့ စားပွဲထိုးတွေက
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မှ ဟာဂျီမီ စားသောက်ဆိုင်ကတော့ စားပွဲထိုးတွေကို စက်ရုပ်တွေနဲ့ အသုံးပြုပါ
ဒတ်ခ်ျ (ဟော်လန် ) နိုင်ငံမြို့ တော် အမ်စတာဒမ်က ကင်ဒါကိုကာဖေး မှာတော့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက အရွယ်
မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်...( သူတို့ ကဒါကိုများအဆန်းလုပ်နေတယ်...ရွှေပြည်ကြီးက
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုးတွေအများစုက ကလေးငယ်တွေပါ...ထမင်းဆိုင်တွေတောင်ပါသေး...)
ချက်ဇ်ရီပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပရာ့ ဂ်မြို့ တော်က ကုသရေးကဖေးမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ
က လာရောက်စားသောက်သူ အရက်မူးသမားများ၊ အရက်စွဲသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကို ကူညီကုသ
ဘယ်လ်ဂျီယန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်တဲ့ မိုးပေါ်က စားသောက်ဆိုင် ကတော့ ကရိန်းနဲ့ လေပေါ်မှာချိတ်ဆွဲ
ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကမ္ဘာအနှံ့ လှည့် သွားကာစီစဉ်တည်ခင်းရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်...
သတင်းကို AFP / daily mail မှရယူကာ ဓါတ်ပုံများကို daily mail မှရယူတင်ပြပါတယ်...
DUBAI - Dubai opened on Sundayarestaurant 422 metres (1,350 feet) up in the sky on the 122nd floor of the world’s tallest building, Burj Khalifa, its developers said.
Atmosphere in Dubai’s 828-metre (2,716.5-feet) building is “one of the finest luxury dining and lounge experiences in the world,” said Emaar Hospitality Group, an arm of giant property developer Emaar.
At two levels below the tower’s observation deck, the “world’s highest restaurant” can host “over 210 guests and featuresaspacious arrival lobby,amain dining floor, private dining rooms and display cooking stations.”
In addition to apartments, offices and Italian designer Giorgio Armani’s signature hotel, the building has an observation deck on the 124th floor, open to visitors at an entrance fee of at least 100 dirhams (27 dollars) per adult.
Emaar spent 1.5 billion dollars on the tower, named after United Arab Emirates (UAE) President Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan who came to the aid of Dubai, hit by the global financial crisis.
Oil-rich Abu Dhabi extendedalifeline of 10 billion dollars, on top of the same amount from the UAE central bank, to bail out Dubai’s heavily-indebted state firms in 2009.
- At the Kayabukiya Tavern in Utsunomiya, Japan, you will be served by monkeys
- Hajime in Bangkok, Thailand, has robots for waiters
- The Dutch capital, Amsterdam, is where you will find Kinderkookkafé, where the staff are children
- Cafe Therapy in Prague, the Czech Republic, isarestaurant that assists people to over come drug or alcohol addiction
- Dinner in the Sky, which is owned byaBelgium-based company and travels all the world, isadining table suspended in the air
Posted by Unknown | at 9:44 AM | 1 comments
Labels: news: AFP
Honest trash collector returns RM115,659
ကောက်ရငွေ ထိုင်ဝမ် ၁.၁ သန်း ပြန်ပေးသည့် အမှိုက်ကောက်အမျိူးသမီး...
Yang (left) returning the money to Lin (right)
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အကျင့် စာရိတ္တရိုးသားရိုးသားဖြူစင်ဖြောင့် မတ်သည့် အမှိုက်ကောက်သည့် အမျိူးသမီးကြီး
တစ်ဦးဟာ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁.၁ သန်း ( ဒေါ်လာ ၃သောင်း ၇ ထောင်ကျော် ) လမ်းမပေါ်မှတွေ့ ရှိကောက်ရခဲ့ 
ပြီးနောက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ ယန်းဟွမ်မူဒန်း အမည်ရှိအမျိူးသမီးကြီးဟာ ( ကောက်တွေ့ လို့ ပြန်အပ်လျှင်ရရှိနိုင်မည့် 
ဆုကြေးငွေ ) သုံးရာခိုင်နှုံးကိုပင် လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော်လည်းအတန်တန်ဖြောင်းဖျပြောဆိုခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၀၀၀ ( ဒေါ်လာ
၁၀၀ ကျော်ခန့် သာ ) ကိုသာလက်ခံယူခဲ့ ပါတယ်လို့ အန်ပေါင်း သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မတစ်သက်တာမှာဒီလောက်များတဲ့ ငွေတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ ဖူးပါဘူး....ယူထားလိုက်မိယင်လည်းကျွန်မ
ဒီငွေကိုကျပျောက်ခဲ့ တဲ့ သူဆိုလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ပူနေမှာပါပဲ..." လို့ တစ်လလျှင်ထိုင်ဝမ်ငွေ ၅သောင်း
( ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကျော် ) ၀င်ငွေရရှိသည့် ယီလန်ဒေသမှ အမျိူးသမီးကြီး ယန်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ ရိုးသားဖြောင့် မတ်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အိမ်နီးနားချင်းများက ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ ပြီး သူမအတွက်၎င်းတို့ 
အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
Yang is respected for her honesty
သူမရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုကြောင့် လူအများက လေးစားရပါတယ်...
မူလတန်းပညာသာတတ်မြောက်ခဲ့ သည့် ယန်းဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ၂၅ နှစ်အကြာက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်
သွားပြီးကတည်းက သားသမီး ခြောက်ယောက်ကို ပြုစုစောင့် ရှောက်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် စနေနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာတော့ ဈေးထဲမှ ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ ရသည့် (ကတ္တူစက္ကူကဲ့ သို့ ) စွန့် 
ပစ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကောက်ယူခဲ့ အပြီးမှာငွေတွေထည့် ထားသည့် အိတ်ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ငွေတွေကိုပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ဖို့ သူမဟာ ရဲစခန်းကိုအလျင်အမြန်သွားရောက်ခဲ့ ပြီး နောက်စိုးရိမ်
ပူပန်နေရှာတဲ့ လင်း ဟုသာဖော်ပြသည့် စာရင်းကိုင်စာရေးနှင့် တွေ့ ရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
လင်း ကသူမဟာထိုငွေများကိုဘဏ်သို့ သွားရောက်အပ်နှံရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သူမကားဆီသို့ လျှောက်သွားနေ
ခဲ့ စဉ် သူမ၏ဖုံးအသံမြည်လာခဲ့ လို့ ငွေထုတ်ကို ကားစက်ဖုံးပေါ်တင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဖုံးစကားပြောပြီးနောက် ငွေထုတ်ကိုလုံးဝမေ့ လျော့ သွားကာ ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၃၇နှစ်ရှိ စာေ၇းမဟာ ကားမောင်းသွားပြီး တစ်ကီလိုမီတာလောက်အရောက်ကျမှ သူမငွေအိတ်
အကြောင်းကို သတိရမိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူမဟာ အမျိူးသမီးကြီးယန်း ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်...
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်၇လို့ ကိုယ်ပြန်ခံစားရတဲ့့ပီတိ၊ စိတ်ချမ်းသာ
မှုက ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်...
စာရိတ္တပျက်ပြားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တွေ့ ရခဲတဲ့ ကိုယ်ကျင့် သီလဖြူစင်မှုတစ်ခုပါပဲ...
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက အမှိုက်ကောက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေကလည်း တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကျော်ရှိတယ်တဲ့ 
ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ မကြီးကိကိ တို့ ဆိုယင်ဒီထက်ဘယ်နှစ်ဆတောင်ပိုရနေဦးမလည်းမသိဘူး...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကမန်ဒရင်းပဲနည်းနည်းပါးပါးရတာ၊ ကန်တုံနိစ် မရလို့ ဖြစ်မယ်တော့ မထင်...
An honest trash collector in Taiwan returned NT1.1mil (RM115,659) which she picked up from the street to the owner.
Yang Huang Mu-dan, 67, also refused to take the three-per cent reward she was entitled to.
However, after much persuasion, she agreed to takeaNT$3,000 (RM315) ang pow.
"I have not seen so much money before. If I take it, I would feel guilty for the rest of my life.
"The person who lost it must be very anxious," said Yang of Yilan, who earnsamonthly household income of about NT$50,000 (RM5,254).
Her honesty has been highly praised by the police and her neighbours, most of whom said that Yang had made them proud.
Yang, who only received primary education, has been takings care of her six children alone after her husband died 25 years ago.
On Saturday morning, after collecting some recyclable items from the market, she found the bag containing the cash.
In an attempt to return the money, she rushed to the nearest police station, where she met the anxious accountant - identified only as Lin.
Lin said she was to have banked in the takings of her workplace. But as she walked to the car, her phone rang, so she placed the bag on the boot.
After answering the call, she drove away, completely forgetting about the bag.
The 37-year-old woman drove for about 1km before she realised what she had done.
She thanked Yang repeatedly.
Posted by Unknown | at 5:21 AM |3comments
Labels: Source: Apple Daily
Dubai sex case Briton 'was sacked for flirting'
အချစ်သဘောကောင်းလွန်းသည့် ဗြိတိန်သူ အလုပ်မှရပ်စဲခံရ ...
ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနှင့် အိပ်ယာထဲတွင်အတူရှိနေသည်ကိုလက်ပူးလက်ကြပ်တွေ့ ရှိကာလက်မထပ်ပဲ
အတူနေမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ခံခဲ့ ရသည့် ဗြိတိသျှအမျိူးသမီးတစ်ဦးအား အမျိူးသားများနှင့် ပရောပရီလုပ်
မှုကြောင့် ( အမျိူးသားများအား ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့ လုပ်တတ်မှုကြောင့် ) အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခဲ့လိုက်ရသည်
ဟု သူမ၏အလုပ်ရှင်မှယမန်နေ့ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ ဒန်နီယယ်စပန်ဆာ ဟာသုံးပွင့် ဆိုင်ချစ်ရမ္မက်ဇတ်လမ်းထဲမှာပါဝင်ပါတ်သက်နေခဲ့ ရာမှ
အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်၏တင်းကြပ်သော ကိုယ်ကျင့် သီလဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေချိူးဖောက်ခဲ့ ကြောင်းသိ
ရှိခဲ့ ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ခံခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
တစ်နှစ်လျှင်လစာငွေ ပေါင်စတာလင်တစ်သိန်း ( ဒေါ်လာတစ်သိန်းခွဲခန့် ) ရ၇ှိနေသည့် အိမ်ခြံမြေအကဲဖြတ်
သုံးသပ်သည့် ( အိမ်ခြံမြေပွဲစား ) အမျိူးသမီးဟာ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သူ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသား တိုဘီကာရိုး
နှင့် ရင်ခုန်ယစ်မူးဖွယ်ညတစ်ညကိုဖြတ်သန်းကြည်နူးနေခဲ့ စဉ် ထိုသူ၏ချစ်သူမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဘ
ရာဇီးနိုင်ငံသူအမျိူးသမီးမှ ၎င်းတို့ ၏အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ရုတ်တစ်ရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ ကာ သူမတို့ နှစ်ဦး
အား အိပ်ယာပေါ်မှာ အတူတစ်ကွတွေ့ ရှိသွားခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
အပျော်မယ် မော်ဒယ်လိုလည်း ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့ လိုင်စင်မရှိပဲ ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ တဲ့ ဒန်နီယယ်စပန်ဆာ
Modelling pose: Expat Danielle Spencer, who may be charged with having extramarital sex
ထိုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဟာ ပရစ်ဆီလာ ဟုအမည်ရှိသည့် ဘရာဇီးမလေးနှင့် ချစ်သူအဖြစ်မှ လွန်ခဲ့ သည့် တစ်
ရက်မှပင် ပြတ်စဲခဲ့ ပုံရခဲ့ ပြီး သူမအနေနှင့် အမျက်ဒေသထွက်ကာ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများအား ဓါးဖြင့် ခုတ်
ထစ်ကာသောင်းကျန်းနေခဲ့ လို့ ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ နေခဲ့ ရသည့် ပွဲစား ( အသည်းစားမလေးလို့ လည်း ဆို
လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်...) မလေး စပန်ဆာတစ်ယောက် ရေချိူးခန်းထဲမှာ ပုံးအောင်းနေခဲ့ ၇ပါတယ်...
ပါတီပွဲမှာ ဆင်ကာနွှဲနေတဲ့ မစ္စစပန်ဆာ...ဒီလိုပုံမျိူးနဲ့ ဆိုတော့ နာမည်ကျော်ထိုက်ပါပေတယ်...
Standing out: Miss Spencer ataparty
ယခုတော့၎င်းတို့ သုံးဦးစလုံးကို ဖမ်းစီးခဲ့ ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ကတည်းက ချူပ်နှောင်ထားခဲ့ ပါတယ်။
အချစ်ကိုဝေမစားနိုင်ခဲ့ တဲ့ အမျိူးသမီးနှစ်ဦးကတော့ ရဲစခန်းကအချူပ်ခန်းထဲမှာ အခြားအမျိူးသမီးအချူပ်ကျ
နေသူ ၉၀ နှင့် အတူအခန်းကျယ်တစ်ခုထဲမှာနေရလျှက်ရှိပါတယ်...
မစ္စစပန်ဆာရော HSBC ဘဏ်ရဲ့ ရာဖြတ်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာကာရို ပါနှစ်ဦးစလုံး မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတစ်ခု
ဖြစ်သည့် ယူအေအီးနိုင်ငံ၏တင်းကြပ်သည့် ဥပဒေချိူးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် လက်မထပ်ပဲ အတူနေမှုဖြင့်
( ခိုးစားတာလူမိသည့် အမှု ) တရားစွဲဆိုခံရဖွယ်ရှိပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကလည်း ဗြိတိသျှလူမျိူး လေယာဉ်မှူးတစ်ဦး၏ဖောက်ပြန်သူဇနီးဖြစ်သူနှင့် သူမရဲ့ 
ရည်းစားတို့ ဟာလည်း ( အတူအိပ်ခဲ့ တာလူသိသွားခဲ့ လို့ ) ထောင်ဒါဏ်တစ်လစီကျခံခဲ့ ကြရပါသေးတယ်..
မနေ့ ကတော့ အိမ်ခြံမြေပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသူမရဲ့ အလုပ်ရှင်ဟောင်းက သူမကို ရုပ်ရှင်ထဲကစာရိတ္တချွတ်
ယွင်းသည့် ဇတ်ဆောင်တစ်ယောက်လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အပြုအမူ၊ ကိုယ်ကျင့် တရားစာရိတ္တ
ပျက်ပြားမှုဟာ ဒူဘိုင်းရဲ့ ဥပ ဒေစံနှုံးအရ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းမှုတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အလုပ်
မှထွက်ဖို့ ပြောကြားခဲ့ တာတစ်လခန့် ပင်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
"သူမဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရော၊ လုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်သည့် ငှားရမ်းဝယ်ယူသူယောကျာင်္းတွေနဲ့ တော်
တော်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွား ပလူးပလဲလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..
သူမရဲ့မော်ဒယ်ကဲ့ သို့ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့ တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေတောင်ကျွန်တော့် ဆီပို့ ပေးခဲ့ပါသေးတယ်...
( ဒါကြောင့် လည်း ) အချိန်ပိုင်းအတွင်း သူမဟာလူသိထင်ရှားလာတာမဆန်းပါဘူး...ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီအ
တွက်တော့ အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဒီမှာက ( ဒူဘိုင်း နဲ့ ယူအေအီးမှာ ) လက်မထပ်ပဲအတူနေခြင်းဟာ တရားမ၀င်၊ ဥပဒေချိူးဖောက်ခြင်းတစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ်...သင့် အနေနဲ့ လူမမြင်၊ မသိအောင်ခိုးဝှက်နေယင်တော့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ 
မသိကျိူးကျွန်ပြုထားမှာဖြစ်ပေမယ့် သူမကတော့အတော့် ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်လွန်းတယ်လို့ ထင်မိပါ
တယ်..." လို့ စီးပွားရေးသမားအလုပ်ရှင်ကဆိုပါတယ်...
အမည်ပြောဆိုဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ တဲ့ အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်က သူမဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ ထူးချွန်ပြီး အိမ်ခြံမြေ
တိုက်တာငှားရမ်းဝယ်ယူသူများကို ဂျူမေရားစွန်ပလွန်ကျွန်းအပါဝင် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ အဆင့် မြင့် တိုက်တာ
" သူမဟာထူးချွန်ထက်မြက်ပေမယ့်အညှာလွယ်ကာ မကာကွယ်နိုင်တာကတော့ တစ်ကယ်ပါပဲ...
သူမဟာ သြတေးလျလေယူလေသိမ်းနဲ့ စကားပြောပေမယ့်တစ်ကယ်တော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဟားလ် နယ်က
ဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကဆက်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
မစ္စစပန်ဆာရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကတော့ သူမဟာ သောကြာနေ့ တိုင်း ( ဒီနိုင်ငံမှာက သောကြာနေ့ ကအ
စိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်...) နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများ စုရုံးပျော်ရွှင်ကြလေ့ ရှိတဲ့ အဖျော်ယမကာနဲ့ ပျော်
စရာရှာကြတဲ့ ကြိုက်သလောက်သောက်တဲ့ သောကြာပွဲတွေမှာတော့ နာမည်ကျော်ပါပဲလို့ ဆိုလိုက်ပြီး ထို
အဖျော်ယမကာနဲ့ အပျော်ရှာတဲ့ ပွဲကနေဇယားခင်းကြပြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ ပါတယ်...
ပင်လယ်ပျော် ကုန်သည်အ၀ယ်တော်ကြီးရဲ့ မယားပါသမီးဖြစ်သူ မစ္စစပန်ဆာ ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဟားလ်
နယ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်မှာ နယူလန်းဒ် မိန်းကလေးအထက်တန်းကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ ပြီး
နှစ်နှစ်ကြာ ကမ္ဘာတစ်ပါတ်လှည့် လည်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...( သူ့ ဝါသနာအရ ကမ္ဘာပါတ်ပြီးဘာလုပ်ခဲ့ မယ်
အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖော်ပြထားသည့် သူမ၏ကိုယ်ေ၇းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အရ သူမဟာ ဒူ
ဘိုင်းမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဈေးကွက်မြှင့် တင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အရောင်းမန်နေဂျာ၊ ၎င်းနောက်
ထိုစဉ်က တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးနေခဲ့ တဲ့ တိုက်တာ၊ခြံမြေဈေးကွက်ရဲ့ အကဲဖြတ်သုံးသပ်သူ ( အိမ်ခြံ
မြေပွဲစား ) အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားခဲ့ ပါတယ်...
နှစ်ပင်လိမ်၊ သုံးပွင့် ဆိုင်အချစ်နဲ့ နွံနစ်ခဲ့ ရသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းသမား တိုဘီကာရိုးလ်...
Still in custody: Banker Toby Carroll
လွန်ခဲ့သည့် ညကတော့ သူမ၏မိခင်ဖြစ်သူ အိမ်ထောင်အသစ်ထူထောင်ထားခဲ့ သည့်အိန်ဂျယ်လာဂန်တာ
ကတော့ သူမအနေနှင့် သမီးဖြစ်သူရှိရာ ဒူဘိုင်းကိုချက်ခြင်းသွားရောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် ခရီးစားရိတ်မ
တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီး ငိုယိုနေခဲ့ ပါတယ်...
" ဒါဟာ ( အခုလိုအချူပ်ထဲရောက်နေတာဟာ) မိဘတိုင်းအတွက် ငရဲတစ်မျှခံစားရချက်ပါပဲ...ကျွန်မက
တော့ ရူးမတတ်ခံစားရပါတယ်...သူမဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိနားလည်
ရမှာဖြစ်ပြီးလေးစားလိုက်နာရပါမယ်...ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကတော့ ကျွန်မသမီးကို ထောင်
ထဲကပြန်လွှတ်ပြီး သူမဘ၀လေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေချင်တာပါပဲ..." လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ သမီးဖြစ်သူကို အာမခံထားလို့ ၇ယင်အာမခံပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် သူမအတွက်တော့ ရှေ့ နေငှားပေးဖို့ 
မတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ လည်း မိခင်ဖြစ်သူမစ္စက်ဂန်တာ ကသမီးဖြစ်သူကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
(ယူအေအီးနိုင်ငံရှိ ) ဗြိတိသျှသံရုံးကတော့ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကူညီမှုတွေပေးနေပါတယ်လို့ ပြော
A British woman locked up in Dubai after being caught in bed withabanker had been let go fromaformer job amid concerns about her flirtatiousness, her ex-boss claimed yesterday.
Danielle Spencer, 31, has been in ­custody since falling foul of the Gulf state’s strict morality laws when she unwittingly found herself at the centre ofasordid love triangle.
The £100,000-a-year property analyst had spent the night with New Zealander Toby Carroll, only for his Brazilian former girlfriend to burst in and find them in bed together, according to police in Dubai.
He had apparently broken up with the woman – named only as Priscilla – the day before, and she flew intoarage, allegedly slashing at furnishings withaknife whileaterrified Miss Spencer hid in the bathroom.
They were all arrested and have remained in custody since December 12 – with the two women having to sharea­single large police cell along with up to 90 other female suspects.
Both Miss Spencer and Mr Carroll –aproperty analyst for HSBC bank – may be charged with having sex outside marriage,acriminal offence in the strict Muslim emirate for whichaBritish pilot’s wife and her lover were jailed foramonth in 2009.
Yesterday her ex-boss at an estate agency described her as ‘a Walter Mitty character’ who had been asked to leave after barelyamonth for fear that her behaviour would causeascandal by Dubai’s standards.
‘She could be extremely flirtatious, both with colleagues and clients,’ said the ­British businessman. ‘Danielle sent me photographs of herself in modelling poses.
‘Needless to say she quickly became rather popular, but she was becoming an embarrassment for the firm.
Extramarital sex is illegal here, and while the authorities will turnablind eye if you’re discreet, I thought she was being pretty flagrant.’
The businessman, who asked not to be named, said she had been good at her job, showing clients around luxury properties, including on the Palm Jumeirah sand island complex.
‘She was clearly intelligent, butareal Walter Mitty character,’ he added.
‘She spoke with an Australian accent, but we later found out she was originally from Hull.’
A friend said Miss Spencer wasawell-known face on Dubai’s party scene, regularly attending the expat tradition of Friday Brunch – weekly all-you-can-drink binges that can land ­revellers in hot water.
The stepdaughter ofamerchant seaman, Miss Spencer grew up in Hull, leaving the all-girl Newland High School aged 16 to spend two years backpacking around the world.
According to her online professional profile, she has worked in Dubai since 2004, with positions asasales manager atamarketing firm and as an analyst in the emirate’s then-booming property market.
Last night her mother Angela Genter, who has remarried, wept as she told how she was desperate to visit her but couldn’t afford to fly to Dubai.
‘My stomach is inaknot and I honestly don’t know what I can do to help her,’ she told the Daily Mail.
‘It’s every parent’s worst nightmare. I am at the end of my tether.
‘She knows the laws out there and we have to respect their system. But asamother I just want her out of prison so she can get her life back to normal.’
Mrs Genter has been told her daughter will be bailed ifasurety is put up, but she can’t affordalawyer to represent her.
The British Embassy said it was offering consular assistance.
Posted by Unknown | at 3:15 AM | 1 comments
အပေါ့ သွားယင်း ဆော့ ကစားနိုင်မည့် ဗီဒီယိုဂိမ်း...
အပေါ့ သွားယင်းဆော့ကစားနိုင်မည့် ဆီဂါဗီဒီယိုဂိမ်း စနစ်တစ်မျိူးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆီဂါကော်ပိုရေးရှင်းကတီ
အထူးအဆန်းတွေကိုမှ လုပ်တတ်တဲ့ ကိုရွှေဂျပန်တွေအတွက်ကတော့ တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးမ၇ိုးနိုင်ရလောက်
အောင်ပါပဲမဟုတ်လား ....( ယခင်ကလည်း အိမ်သာတက်နေစဉ် မနှစ်မြို့ ဖွယ်အသံများကိုဖုံးလွှမ်းသွားစေ
နိုင်ရန် အိမ်သာအတွင်း တေးဂီတသံစဉ်များပေါ်ထွက်နေမည့် နည်းစနစ်တစ်မျိူးလည်း တီထွင်ခဲ့ ပါသေး
သမားရိုးကျ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနည်းတွေကိုလူကြိုက်များအားပေးနေကြတာမို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဗီဒီယိုဂိမ်းအဓိက
တီထွင်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးအနေနှင့် မည်သူမျှမကြံစည်နိုင်သေးသည့် ရေအိမ်သုံး ကစားနည်းကိုတီထွင်ကြံ
တစ်ချိူ့ သူများက အပေါ့ အပါးသွားယင်း စိတ်ကူးတည့် ရာဟိုဟိုသည်သည် ရွှေပြွန်ကရေသွန်တတ်ကြသလို
တစ်ချိူ့ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိသူများကလည်း ခဲတစ်လုံးဖြင့် ငှက်နှစ်ကောင်ဆိုသလို အပေါ့ သွားယင် အိမ်
သာကြွေအိုး၊ အပေါ့ စွန့် ကြွေအိုးတစ်ဝိုက်မှပေကျံနေသည်များကို ပက်ဖြန်းသန့် စင်ပေးတတ်ကြတာမို့ ယခု
ကဲ့ သို့ ထိုအမူအကျင့် များကိုအခြေခံပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်မျိူးတီထွင်နိုင်ခဲ့ ခြင်းဟာ မိုက်မဲမှုတစ်ခုတော့မ
ဆီဂါ အပေါ့ သွား၊ ဆော့ ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းဟာ အပေါ့ စွန့် ကြွေအိုးတွင် ဖိအားတန်ပြန်အာရုံခံကိရိယာ
တစ်ခု အချက်ကျစွာတတ်ဆင်ထားပြီး ထိုအာရုံခံကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းဆီသို့ အချက်အလက်များပေး
ထိုနည်းပညာတွင် အပေါ့ သွားယင်းအပျင်းပြေဆော့ ကစားနိုင်ရန် ကစားနည်းလေးမျိူးပါဝင်ပါတယ်...
အပေါ့ သွားယင်းအပျင်းပြေ အရုပ်ကလေးတွေ ဖျက်လို့ ရတယ်နော်...
Graffiti eraserးဒီကစားနည်းကတော့ ရွှေပန်းကရေဖြန်းသူဟာ၎င်း၏ရေပန်းဖြင့် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ ပုံရိပ်
ယောင်များ ( ရုပ်ပုံလေးများ ) ကိုဖျက်နေသလိုဖြစ်မှာမို့ လိုရာစေညွှန်းနိုင်ဖို့ ရွှေပန်းနဲ့ ရေဖြန်းမှုကိုထိန်းချူပ်
အားလျော့ သေးတယ် မောင်လေးရယ်....
The North Wing and Herးဒီကစားနည်းကတော့ သင့် ရဲ့ ရေဖြန်းအားအကြီးအသေး၊ အပြင်းအပျော့ ပေါ်
မူတည်ပြီး သင့် ရှေ့ ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်က ဂါဝန်ဝတ်ကောင်မလေးရဲ့ ဂါဝန်ကို ပင့် တင်ကာ သင့် ကိုအ
မီးသတ်ပိုက်လား သင်္ကြန်ရေပြွတ်လားဆိုတာ သိရမယ်...
Milk from Noseးဒီကစားနည်းမှာဆိုယင် ကစားသူတစ်ဦးထက်မကပိုမိုပါဝင်နိုင်ပြီး သင့် ရှေ့ ကအသုံးပြု
သွားသူရဲ့ ရေဖြန်းအားနှင့် သင့် ရဲ့ စွမ်းပကားရေဖြန်းအားတို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ပုံထဲမှာတော့ လူနှစ်ယောက် ၎င်းတို့ ရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်ထဲမထွက်လာတဲ့ နွားနို့ များနဲ့ ကွင်းတစ်ခုကို သူနိုင်
များများသောက်ယင်တော့ များများပေါက်မှာပေါ့ ...
Mannekin Pisးဒီကစားနည်းကတော့ ဘရပ်ဆယ်မြို့ ကနာမည်ကျော် ရွှေပြွန်ကရေသွန်နေတဲ့ ကောင်က
လေးရုပ်ထု ရဲ့ အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်...
သင့် ရဲ့ ဘီယာသောက်ပြီးရှူရှူပေါက်နိုင်တဲ့ ပမာဏ အနည်းအများကို တိုင်းတာသတ်မှတ်ကစားနိုင်မှာဖြစ်
ဆီဂါ ရေအိမ်သုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများကို ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆိုင်များ
ဂျပန်နိုင်ငံမှတီထွင်ထုတ်လုပ်သူကတော့ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာရေအိမ်သုံးအဆိုပါ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို အမြောက်အ
များထုတ်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသးပါဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ ပေမယ့် ဂျပန်ဆိုတာကလည်း လူကြိုက်များ
ယင်ဘာမဆိုလုပ်တတ်တာမို့ဆက်လုပ်ထုတ်လုပ်မယ်၊ မလုပ်ဘူးဆိုတာကတော့ အသေအချာပြောလို့ မရ
စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ယခုကစားနည်းဟာ အမျိူးသားများအတွက်သာဖြစ်ပြီးအမျိူးသမီးများ
မဖြစ်မနေပါဝင်ချင်တယ်ဆိုယင်တော့ ယခင်က ဖေါ်ပြခဲ့ ဖူးတဲ့ တရုတ်ပြည်က အမျိူးသမီးသုံး မတ်တပ်ရပ်အ
ပေါ့ သွားအိမ်သာမှာသုံးတဲ့ ကိရိယာနဲ့ မှပဲအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့် မယ်...
Graffiti eraser – in which…”gamers” have to control their urine stream to erase virtual graffiti drawings on the display;
The North Wing and Her – in which your urine is displayed asahorny little wind trying to blow the dress offagirl;
Milk from Nose –amultiplayer video game that compares the strength of the person’s urine stream strength to that of the previous user. The animation features two guys blowing milk out of their noses trying to push each other out ofaring;
Mannekin Pis – named after the famous sculpture ofaboy peeing, in Brussels, this game shows the user how much liquid he urinated.
SEGA Toylets are currently available at select locations across Japan, until January 31st. The Japanese developer stated it has no concrete plans to mass produce these funny toilets, but it’s Japan, so you never know.
Posted by Unknown | at 2:11 AM |2comments
Woman paralysed by love bite
စိတ်လျှော့ နော်ဆရာ....လေဖြန်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ ...
ရွှေလည်တိုင်အနမ်းကြောင့် သွေးကြောတောင်ပိတ်သွားခဲ့ ရပြီး လေဖြတ်သွားခဲ့ ရပါတယ်....
Doctors reportedawoman developedablood clot asaresult of receivingahickey. This then led toastroke (posed by models)
အချစ်ဆိုတာပူလောင်ပြင်းပျတဲ့ ခံစားမှုဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံလည်း ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရတတ်တယ်ဆိုတာ
ဒါပေမယ့် ချစ်မိသည့် အမျိူးသမီးတစ်ယောက်မှာတော့ ချစ်ရည်လူးသည့် အကြင်နာ၊ နွေးထွေးမှုအနမ်းမှတ်
တမ်းက ကိုယ်တစ်ပိုင်းလေဖြတ်မှုကို ခံစားစေခဲ့ ရရှာပါတော့ တယ်...
သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ပထမဦးဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ထိုကဲ့ သို့ အချစ်ကြောင့် လေဖြတ်ရမှုဟာ အသက် ၄၄ နှစ်အ
ရွယ်ရှိ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ အမျိူးသမီးကြီးတစ်ဦး သူမရဲ့ ချစ်သူ ( ခင်ပွန်း ) က ရွှေလည်တိုင်ကို အချစ်အနမ်း
ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပေးခဲ့ ရာက ဖြစ်ခဲ့ ရတာလို့ ဆိုပါတယ်...
Love bites can be dangerous. Pic from www.sixthseal.com
ဒီလိုရွှေလည်တိုင်ကို အကြင်နာပေးယင် အခန့် မသင်တဲ့ အခါ နာကြင်ပြီး အန္တရယ်ကြီးတတ်ပါတယ်...
သူမရဲ့ ချစ်သူနှင့် အကြင်နာအနမ်းတွေဖလှယ်ကာ ကယုကယင်ချစ်တုံ့ တင်ကြပြီးနောက် သူမ၏ဘယ်ဘက်
လက်မောင်းတစ်ဝိုက် လှုပ်ရှားလို့ မရတော့ သည့် နောက် ထိုအမျိူးသမီးကို နယူဇီလန်နိုင်ငံ၊ အုတ်ကလန်
မြို့ ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်လိုက်ရပါတယ်...
သူမဟာ လေဖြန်းသွားခဲ့ တယ် ( တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေဖြတ်သွားခဲ့ တယ် ) လို့ ဆရာဝန်များက သံသယရှိ
ခဲ့ ကြပေမယ့် ဘာကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ခဲ့ တယ်ဆိုတာတော့ မတွေ့ ရှိ ( စမ်းသပ်လို့ မရနိုင် ) ခဲ့ ကြပါဘူး...
၎င်းနောက် သူမရဲ့ လည်ပင်းညာဖက်ပိုင်းမှာ (စုန်းစုပ်တယ်လို့ ရှောင်လွှဲပြောတတ်ကြသည့် ချစ်အနမ်းအရာ)
ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေသည့် ထိခိုက်ထားသည့် ဒါဏ်ရာကဲ့ သို့ သောအရာ ခပ်မှိန်မှိန်အရာတစ်ခုကို ဆရာ
၀န်များက သတိပြုခဲ့ မိကြပါတယ်...
အင်နဲ့ အားနဲ့ ရွှေလည်တိုင်ကိုအနမ်းပေး၊ စုပ်ယူခဲ့ တဲ့ ထိုအချစ်ဒါဏ်ကြောင့် အဓိကသွေးလွှတ်ကြောမကြီး
တစ်ခုကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ ပြီးသွေးကြောပိတ်ဆို့ မှုဖြစ်ကာလေဖြန်းခဲ့ ရတာကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ကြရပါတယ်...
အဆိုပါသွေးကြောပိတ်ဆို့ မှုဟာ ( သွေးခဲလေးဟာ ) အမျိူးသမီး၏နှလုံးဆီသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ ကာလေဖြန်း
အဲဒီနောက်တော့ တီဗီထိုင်ကြည့် နေစဉ် သူမဟာ ( လက်တစ်ဖက်လှုပ်မရတဲ့ ) ဝေဒနာကိုသိရှိခံစားခဲ့ ရ
" ရွေလည်တိုင်အနမ်းမို့ အားနဲ့ စုပ်ယူမှုတွေရှိခဲ့ မှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ အုတ်ကလန်ပြည်နယ်၊ မစ်ဒယ်လ်မိုး
ဆေးရုံတွင် ထိုအမျိူးသမီးအား ကုသပေးခဲ့ သည့် ဒေါက်တာ တက်ဒီဝူး ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကိုလူဆိုးကြောင့် ဒီဆေးရုံကိုရောက်သွားခဲ့ ရပါတယ်...
" ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ ယခုကဲ့ သို့ ရွှေလည်တိုင်ကိုအနမ်းပေးမှုကြောင့် ဆေးရုံရောက်ရတယ်
ဆိုတာ ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ် ( ဒီအမျိူးသမီးဟာပထမဦးဆုံးပဲ ) ဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါ
အကယ်၍ထိုအမျိူးသမီးအားအချိန်မှီမကုသခဲ့ ပါက လေဖြတ်မှုများနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပွားနိုင်ကာ
လူနာအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးလေဖြတ်ပြီး မလှုပ်မရှားနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ အဆိုပါဆရာဝန်က ပြောကြား
တစ်ခေတ်တစ်ခါကနာမည်ကျော်ခဲ့ တဲ့ အဆိုတော်ခိုင်ထူးရဲ့ ရွှေလည်တိုင်သီချင်းလေးကိုအမှတ်၇စရာပါပဲ...
အကြင်နာတွေကိုတော့ လျှော့ ကြပေါ့ ဗျာ...
It's well-known to anyone inarelationship that love can hurt - but one woman was left partially paralysed afteraromantic encounter went wrong.
In the first reported case of its kind, the 44-year-old from New Zealand sufferedastroke after her amorous partner gave heralove bite.
She was driven to hospital in Auckland, New Zealand, after she experienced loss of movement in her left arm after an amorous encounter.
Doctors suspected she had hadasmall stroke - but could not find any obvious cause.
Then they noticedafading bruise on the right side of her neck -alove bite, also known asahickey.
Underneath the bruise they found the cause of the stroke - damage toamajor artery, whereablood clot had formed after the suction of the love bite.
The clot had then travelled to the woman's heart, causing the stroke. She then noticed the problem while she was sitting watching television.
'Because it wasalove bite, there would bealot of suction,' said Dr Teddy Wu, who treated the Maori woman at Auckland's Middlemore Hospital.
'To my knowledge, it's the first time someone has been hospitalised bya"hickey",' he said.
'Because of the physical trauma of the sucking, it had madeabit of bruising inside the vessel (the artery).
'The clot had gone into the woman's heart and causedaminor stroke that led to the loss of movement.
'We looked around the medical literature and that example of havingalovebite causing something like that hasn't been described before,'
The unnamed woman was treated with warfarin, an anti-coagulant, which resulted in the clot disappearing almost entirely withinaweek.
Dr Wu reported the case in the current edition of the New Zealand Medical Journal.
He told The Press newspaper in Christchurch that if the problem had not been treated quickly the woman could have suffered further strokes.
'Strokes have different levels of severity,' he said, 'but possibly patients can become paralysed.'
Posted by Unknown | at 11:25 PM |4comments
Labels: news: daily mail / daily chilli
ဟိမ၀န္တာတောင်ထိပ်က တောင်ဆိတ်တွေ... ပြောယင်တော့ ယ...
Man who fathered child at 14 to become UK's younge...
Stoned to death with her lover: Horrific video of ...
Now I have two right feet: Chinese man has left fo...
Champion rooster slashes its owner's throat for be...
There's no place for onions in this village
ယနေ့ အတွက် သတင်းဓါတ်ပုံ.... ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ အ...
Dog takes its loyalty to the grave in Brazil
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... စိတ်လက်ပေါ့ ပါးစရာအင်...
Fat, friendly feline is 'mayor' of village
The 100-Year History of the Bra
Man shot in head but sneezes bullet out
Toy salesman who raped 96 boys
Developers demolish all the stairways ofabuildin...
Mother leaves husband for stepson - then dumps him...
He survived snake bites but fell prey to mosquito ...
She had several sex partners by 12 ﻿
Former world's fattest man to sue health service
Chinese computer geek has fitting headstone
အပန်းဖြေစရာဓါတ်ပုံကမ္ဘာ.... အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ...
Study: Single women find married men more attractive
Man jailed for 99th time in 30 years
Indian Chief Minister's wife seeks loan to buy onions
Women in power around the world
Malaysian centenarian ready to wed again
Sale appeals to naked greed
English teachers replaced by dancing robots in Sou...
Twins in Poland have different fathers
Justice done: Israeli media